Safiirka Mareykanka u fadhiya Finland oo aad u ammaanay awoodda ciidan ee Finland | Onkod Radio
Safiirka Mareykanka u fadhiya Finland oo aad u ammaanay awoodda ciidan ee Finland
Calanka Finland, Photo By Mohamed Ibrahim
Muqdisho (Onkod Radio ) – Doughlas Hickey, safiirka Mareykanka u fadhiya Finland oo wareysi siiyay Fox News ayaa sheegay in uu awoodda ciidan ee Finland la yaabay, wuxuuna Finnishka ku sifeeyay dad aan cabsan oo aad u dhiirran.
Safiirka oo warkiisa sii watay islamarkaasna ka jawaabayay su’aal uu weriyuhu weydiiyay oo la xiriirtay, in Finland ay dagaalka Yukreyn kaddib ka baqanayso Ruushku ayaa sheegay, in Finland ay muddo sannado ah ku diyaargaroobaysay xuduudda Ruushka kala dhexeysa oo dhan 1344 kilomitir. Ilama ahan in Finnishku cabsadaan, cabsiduna ma ahan mid ku jirta DNA:ga (hiddo-side) Finnishka.
Ruushku ayaa dhanka kale Finland ka joojiyay gaaskii ay ka qaadan jirtay kaddib markii uu dhacay wakhtigii uu Ruushku u qabtay Finland ee ahaa, in lacagta gaaska ay ka iibsato ay ku bixiso lacagta Ruushka.
Hadalkan safiirka ayaa yimid xilli dagaalka Yukreyn ka socda ee uu Ruushku ka wado uu sii xoogeystay Finland iyo Swedenna ay wadaan qorshe ay kula biirayaan Gaashaanbuurta Nato, inkastoo Turkigu uu shuruudo adag ku xiray ku biirista Nato ee Finland iyo Sweden.